မျက်နှာဖုံးနဲ့ လူ …. – Shinyoon
မျက်နှာဖုံးနဲ့ လူ ….
November 9, 2020 by Shin Yoon
ဇာတ်လမ်းတွေရဲ့အစမှာတော့ … သိပ်ကို ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် ကျွန်မကို သိပ်လဲ ကြင်နာတတ်ခဲ့တယ် ။ အလိုလိုက်တာတွေထက်လဲ ပိုသလို စကားတွေဆို သိပ်ကို ချိုတာပဲ ။
အဲ့ဒီအပြောတွေ အဲ့ဒီအပြုအမူတွေဟာ အချိန်တစ်ခုအထိပဲ ခံခဲ့မယ်မှန်း ကျွန်မ လုံး၀မသိခဲ့ဘူး ။ ကျွန်မအထင်က မေတ္တာစစ်မှန်ရင် စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတွေသာ တစ်ဖန်ပြန်ပြီးရလာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ ယုံကြည်ခဲ့မိတာလေ ။
ကျွန်မ သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို အရိုးသားဆုံး ၀န်ခံခဲ့မိတယ် ကျွန်မ အရမ်းကို မှားခဲ့တာပဲ ။ အရင်ကလို တီတီတာတာတွေ ပြောဖို့ အချိန်တွေ မအားတော့ဘူး ။ အလုပ်များနေလို့ပါဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေအောက်မှာ ကျွန်မကို ပစ်ထားတတ်လာတယ် ။ အဆင်မပြေလို့ပါဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ကျွန်မ အပေါ် ပေါက်ကွဲတတ်လာတယ် ။
သိပ်ကို ပြောင်းလဲသွားတာပဲလို့ အစက ထင်ခဲ့မိတာ တကယ်တမ်းကျ ချစ်ယောင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေအောက်က အစစ်အမှန်တွေကို ကျွန်မ ခုမှ မြင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ ။ လူတစ်ယောက် ရဲ့ အပေါ်ယံ မျက်နှာဖုံးတွေဟာ ကြာကြာဖုံးထားလို့ မရဘူးတဲ့ ။ သူရဲ့ ချစ်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာလဲ အချိန်ကြာကြာ မခံခဲ့ဘူး ။
အလှဆုံးရယ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်မလေးဟာ မျက်လုံးတွေ မို့နေတဲ့အထိ ငိုခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသွားပြီ ။ သိပ်ကို သရုပ်ဆောင်ကောင်းလွန်းတဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေ သုံးထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကြောင့်ပေါ့ ။
မ်က္ႏွာဖုံးနဲ႔ လူ ….
ဇာတ္လမ္းေတြရဲ႕အစမွာေတာ့ … သိပ္ကို ဂ႐ုစိုက္တတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အျပင္ ကြၽန္မကို သိပ္လဲ ၾကင္နာတတ္ခဲ့တယ္ ။ အလိုလိုက္တာေတြထက္လဲ ပိုသလို စကားေတြဆို သိပ္ကို ခ်ိဳတာပဲ ။
အဲ့ဒီအေျပာေတြ အဲ့ဒီအျပဳအမူေတြဟာ အခ်ိန္တစ္ခုအထိပဲ ခံခဲ့မယ္မွန္း ကြၽန္မ လုံး၀မသိခဲ့ဘူး ။ ကြၽန္မအထင္က ေမတၱာစစ္မွန္ရင္ စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာေတြသာ တစ္ဖန္ျပန္ၿပီးရလာလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္မ ယုံၾကည္ခဲ့မိတာေလ ။
ကြၽန္မ သူ႔ကိုခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ စကားကို အ႐ိုးသားဆုံး ၀န္ခံခဲ့မိတယ္ ကြၽန္မ အရမ္းကို မွားခဲ့တာပဲ ။ အရင္ကလို တီတီတာတာေတြ ေျပာဖို႔ အခ်ိန္ေတြ မအားေတာ့ဘူး ။ အလုပ္မ်ားေနလို႔ပါဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြေအာက္မွာ ကြၽန္မကို ပစ္ထားတတ္လာတယ္ ။ အဆင္မေျပလို႔ပါဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ ကြၽန္မ အေပၚ ေပါက္ကြဲတတ္လာတယ္ ။
သိပ္ကို ေျပာင္းလဲသြားတာပဲလို႔ အစက ထင္ခဲ့မိတာ တကယ္တမ္းက် ခ်စ္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ မ်က္ႏွာဖုံးေတြေအာက္က အစစ္အမွန္ေတြကို ကြၽန္မ ခုမွ ျမင္ခြင့္ရခဲ့တာပါ ။ လူတစ္ေယာက္ ရဲ႕ အေပၚယံ မ်က္ႏွာဖုံးေတြဟာ ၾကာၾကာဖုံးထားလို႔ မရဘူးတဲ့ ။ သူရဲ႕ ခ်စ္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဟာလဲ အခ်ိန္ၾကာၾကာ မခံခဲ့ဘူး ။
အလွဆုံးရယ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေကာင္မေလးဟာ မ်က္လုံးေတြ မို႔ေနတဲ့အထိ ငိုခဲ့ဖူးတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသြားၿပီ ။ သိပ္ကို သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းလြန္းတဲ့ မ်က္ႏွာဖုံးေတြ သုံးထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ေပါ့ ။
ဘ၀နာပါဆိုတာ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် မကျေမနပ်တွေ ဖြစ်နေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး
သူ့ကို သိပ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်မ ရူးမိုက်နေမိတာတော့ ဝန်ခံပါတယ်